Black 505 at Kota Sarang Semut must finally peel bells to BN
Kedah Blackout 505 adds to 'free Adam Adli' chorus by Abdul Rahim Sabri
*ဦးတင်ဦးပြန်ပြောပြတဲ့ ဒီပဲရင်း လုပ်ကြံမှု *
“ဗြိတိန်လွှတ်တော်အမတ်က သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အကြောင်းရှင်းလင်း”
ဒီနေ့ပဲ သမ္မတကြီးက ခရီးသွားတယ်၊ ဒီနေ့ပဲ မန္တလေးမှာ ပဋိပက္ခ တားဆီးရေး အဖွဲကို မြို့ပြင်ထုတ်တယ်။ မန္တလေးမှာ ပြဿနာဖြစ်ရင်တော့ ဒီဝန်ကြီးချုပ် တာဝန် မကင်းဘူး
“ဦးသိန်းစိန် “စီးပွားရေးအကုန်ပိတ်ဆို့လို့ မြောက်ကိုး၇ီးယားကို ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရှာခဲ့တယ်”
Posted: 22 May 2013 08:55 AM PDT
Posted: 22 May 2013 06:47 AM PDT
Posted: 22 May 2013 05:53 AM PDT
Soafew weeks ago, whenateacher fromanearby school called me to ask if I'd be able to giveatalk to the students of her school, and I said yes, immediately I rummaged through my powerpoint files to choose one suitable for an all-girls school. I realised then that my slides were mostly not updated, especially on the HIV/AIDS statistics.
This morning, accompanied by2other volunteers, off I went to the school, which so happened to be the same school where I casted my vote during the recent GE13. I don't usually mind going alone, but I was told before hand that the number of students attending the talk would be around 300, and so I figured I may need some assistance by one or two of my fellow volunteers. I am also hoping that by following me during my talks, one day they'd be able to give similar talks in future.
The talk went well. The girls seemed attentive enough. Oh of course there were some who weren't paying attention andafew who may have dozed off during the talk, but overall, the girls did listen. And at the end of the talk, when I started asking questions (to see if they understood whatever I explained during the talk), even the sleepy ones were wide awake. Why? Because I took out small soft toys to give away to those who could give correct answers.
Immediately after the talk (and after being served some light refreshments), I headed straight to the hospital for my clinic duty. I was told there were supposed to be2new cases, but I waited and waited and waited… no cases were referred to me. Nearing noon, I went over to the doctor's room, and the nurse told me that the2new cases did not turn up.
I called Mar. She didn't answer the phone. Just as I was about to get to the staircase to go down, I met up with Mar. She just came out of the pharmacist's room, getting some counselling about her daughter's medication.
We then walked down together, met the little girl, and I gave the girlaBuddy Bear. She was thrilled! And I was happy seeing the little girl's expression, although deep down inside me, it hurts knowing that the innocent2year old has to live with HIV all her life.
I'll definitely be following up on this girl's developments.
Posted: 22 May 2013 08:27 AM PDT
Katanya walaupun Umno juga mempunyai perwira maya (cyber trooper) tetapi ia tidak cukup kuat dan perkasa untuk melawan propaganda oleh pihak Pakatan Rakyat. Persembahan atau maklumat yang ditaburkan oleh cyber tooper UBN seperti tidak diterima dan ditolak atau tepatnya tidak terlawan "keganasan" maklumat pihak Pakatan Rakyat.
Posted: 22 May 2013 04:49 AM PDT
Here'savery interesting article -amust read - about the gold market.
You might want to check out this article I posted two days ago on the same topic.
BN has 222 parliament seat candidates and 505 state seat candidates. Election expenses ceiling is RM200,000 for each Parliament candidate and RM100,000 for each state seat candidate. So total expenditure ceiling for all BN candidates in total is RM94.9 million. According toasurvey by AC Nielsen and Carat Media, BN and PMO already spent RM176 million on advertisements alone. Can this be
Posted: 22 May 2013 05:09 AM PDT
Today Commander Thaya is celebrating his birthday. Here he is in his younger days, imagines himselfaBollywood star. May all your hopes and dreams come true. Keep on writing!
The federal government should return the administration of Kuala Lumpur to the Selangor State government after alienating Kuala Lumpur to the federal government more than 39 years ago. In 1974, the then BN government decided to alienate Kuala Lumpur asawhole to the federal government's administration which is politically motivated by ostensibly upgrading Kuala Lumpur asa"federal territory".
Posted: 22 May 2013 04:02 AM PDT
Indeed the rakyat keep telling the BN-UMNO time and time again that they are not happy with the outcome of the GE-13. What the throngs of rakyat gathering across the nation in black are saying is that they want acceptable, transparent and immediate answers to the many questions relating to the pre-elections and post election's reported irregularities even before they can accept or reject the post-election outcome.
The Black 505 is not an Anwar-Crusade. Neither is itaChinese-War Fanfare. It certainly is notarebellion of sorts to begin with. What is so difficult to understand this? Black 505 isacrystal clear reflection ofarakyat that is increasing being edged to the cliff of agitated frustration caused by the mishandling of issues and concerns by BN-UMNO given the latter's spiced-up, outmoded threats, flexing of muscles and deep seated arrogance – to begin with.
It is most mind-boggling, that despite having the unstoppable money flows and unhindered access to all kinds of political and social consultants, BN-UMNO still seems to be tackling the rakyat's concerns by rubbing the latter the wrong way up. The most recent Black 505 crowd turn-up at Kota Serang Semut, Kedah, perhaps would seal the final stamp on all those who still operate inadenial mode. The clue is in the very name of the venue, 'Sarang Semut'.
BN-UMNO must wake up and realize what happens when an elephant stampedes ona'sarang semut'. Despite its size and long life span, the elephant is no match to the diligent semut especially when its sarang gets stampeded. Kedah folks have givenapermanent seal to Black 505. It is non-segtarian; it is also not racially colored. It is not about challenging the nation's sovreignity either.
'Sarang Semut' has added inaloud, transparent and affirmative manner that Black 505 cuts across all races and all religions. It has given the final seal that Black 505 is not going to take no for an answer.
UMNO-BN must wake up. It cannot go on and on and operate in contradictions. You cannot have trumpets being sounded fora'reconciliation' when on the flip side you also brandish your brutal swords.
Let truth be told withoutafleeting fear or shades of favor. The newly minted Home Minister appearing in the tabloids with the Police Chief and reports of his warnings to the rakyat will only bring the elephant closer and faster to the sarang semut.
Denying permits and throwing all kinds of boulders into the path of the bee-line of the semut (rakyat) is not going to stop the latter in their tracks. The semut will go around that mountain of hindrance.
Remember, today more and more management gurus are preaching the wisdom of learning strategies through their observation of the communicative and socio-political behavior of all life forms. So wise-up BN-UMNO. Admit that your strategies are failing.
Tackle the issues and serious concerns inamanner that earns praise and ignites hope. If you are truly invincible, challenge the opposition parties toare-election in all the disputed constituencies.
If the EC has failed, have the humility to admit where things have gone wrong. Set up an independent commission of sorts with even members from the local and international fraternity to establish transparently what went wrong and who is to be held accountable.
If you are able to come clean, you will earn the rakyat's endorsement for another fifty years. Why not! But at the way things have being steam-rolled these past weeks, it might just be too late for BN to redeem itself – even with the might of the forces.
Already all the trumpet calls for reconciliation by the PM seem to have expired owing to the contradictory hollering from the unthinking mouths of certain leaders and the cowboy gun-slinger tactics ofafew at the helm too.
Analysts who are not on the ringgit-pipeline of the BN-UMNO but can speak without vetsed interest accept for the sacrosanct principles of democracy will vouch that Black 505 Kota Sarang Semut has said it all.
More than 30,000 people attendeda'Blackout 505' rally organised by Pakatan Rakyat in Kedah last night, the seventh in the series nationwide to date. They expressed solidarity for student activist Adam Adli Abdul Halim, who has been remanded by police, as well as bashed statements by Ahmad Zahid Hamidi since he became home minister last Wednesday.
On cue, the participants - who had gathered in front of the PAS headquarters in Kota Sarang Semut - turned on lighters as sign of support for Adam Adli.
Banners bearing the words 'Free Adam Adli' was unfurled during the rally to call for his immediate release. PKR de facto leader Anwar Ibrahim, vice-president N Surendran and Srikandi chief Siti Aishah Sheikh Ismail took turn to slam the BN government for arresting the student.
"We should rise and defend our nation. They (the authorities have) arrested Adam Adli who was alleged to say that he wants to topple the government. In fact he called on the people to defend the legitimate government, accept democracy and not fraud," said Anwar.
"Their action is (meant) to intimidate other people. This is the rise of the young people, we must help to make it happen."
The organiser claimed that some 80,00 people were at the rally.
Last night also saw rallies to support Adam Adli being held in Kuala Lumpur, Malacca and Batu Pahat (Johor). The one in front of the Jinjang police station attracted some 1,000 supporters.Pakatan leaders took potshots at Zahid for his remarks on Monday that it is undemocratic to topple the government throughapopular coup.
PAS deputy president Mohamad Sabu said the allegation that the people wish to change the government through violence isalie as they have no weapon to do so. "In Malaysia, whoever possesses (unlicensed) weapons can be sentenced to death ... I've taken part in demonstrations fromayoung to an old age, but I have never brought along any weapon," he quipped.
'BN should pack up and leave'
PKR-linked NGO Solidariti Anak Muda Malaysia chief Badrul Hisham Shaharin also dismissed that claim that Pakatan and NGOs intend to initiate an 'Arab Spring' in Malaysia through street demonstrations. "We don't play with 'spring', it is Umno and BN that play with it," Badrul Hisham (left) said. He stressed that BN should "pack up and leave Malaysia" as the coalition only garnered 47 percent of the popular vote in the 13th general election against Pakatan's 51 percent. Anwar called on supporters to attend the upcoming rallies in Terengganu, Malacca and Selangor to show to Zahid and Prime Minister Najib Abdul Razak that they are determined to fight electoral fraud.
Responding to calls that Pakatan should accept the GE13 results and focus on the next general election, Anwar reiterated that the opposition pact would have won Putrajaya if the general election process had been clean and fair. Not only did the BN fail to obtain the majority of the popular vote, said Anwar, it had to rely on the votes of foreigners dubbed 'Banglaysia' to close the gap with Pakatan.
"We should have won this general election. We need to defend our victory ... We need to defend the results of the 13th general election and claim Putrajaya. "We could accept (the results) if there were no foreigners and if the indelible ink was indeed indelible. But if you (BN) cannot defend (the integrity of the election, so), don't ever say the election is valid."
Posted: 22 May 2013 05:20 AM PDT
Posted: 22 May 2013 02:49 AM PDT
No wonder….Kyant Phoot leader U Thein Sein avoid answering the Depayin Massacre and Anti-Muslim Atrocities. Swarn arr Shin is also under the military government.
*ဦးတင်ဦးပြန်ပြောပြတဲ့ ဒီပဲရင်း လုပ်ကြံမှု *UZa Wana on Monday, May 30, 2011
နောက်ကနေ အော်ရင်း လိုက်တယ်။ စဥ့်ကူး အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့တယ်။ အဲဒီမှာ လူငယ်ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ ည ၈ နာရီလောက်ရောက်သွားပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့တည်းတဲ့ အိမ်ကို လောက်လေးတွေနဲ့ ပစ်တယ်။ခေါင်မိုးတွေကိုလည်း မှန်တယ်။
ရဲစခန်းက လက်မခံဘူး။ လက်မခံတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်က ပြောတာက ပထမ FIR လာပြီးဖွင့်ရင်တိုင်တဲ့ဟာကို လက်ခံရမယ်၊ လက်မခံရင် တရားစွဲနိုင်တယ်လို့။ အဲဒီတပ်ကြပ်က
လူတယောက်ပါတယ်လို့ ရဲတယောက်က လာပြောတော့ ပြာပြာသလဲ ထသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ပြာပြာသလဲထသွားလဲဆိုတော့ဒဏ်ရာရတဲ့လူကကြံ့ဖွတ်ထဲတယောက် လောက်လေးခွမှန်လို့ပတ်တီးစည်းပြီးတော့ လာတိုင်တာ။ ဒီမှာ တိုင်နေတဲ့ တိုင်ချက်က မပြီးသေးဘူး၊ကမန်းကတန်း ထသွားပြီးတော့ ဟိုဘက်က တိုင်ချက်သွားဖွင့်တာတို့၊ ဘာတို့ လုပ်တယ်။
ခြေထောက်ပေါက်မှာ တရားပွဲ လုပ်တော့လည်း လူတွေက အုပ်လိုက်လာကြတာပဲ။ အဲဒီလာတဲ့အခါမှာတားတာဆီးတာ၊ ခရာတွေမှုတ် ဘာတွေမှုတ်နဲ့၊ လူထုက မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဘဘတို့ပြောရတယ်၊ လမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အကျယ်ကြီး ပေးထားတာပဲ ဘာဖြစ်လို့ ဒီကားတွေကမသွားဘဲ၊ မလာဘဲနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ခရာမှုတ်နေရတာလဲလို့ ပြောလိုက်တော့မှ ခရာသံတိပ်သွားတယ်။ တရားပွဲတွေဘာတွေ လုပ်ပြီးတော့ ဘဘတို့ မတ္တရာကို ထွက်လာတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတွေက နောက်ကနေ တပါထဲ ပါလာခဲ့တယ်။ မတ္တရာရောက်တော့ နေလည်စာစားပြီးတော့ လူအုပ်ကြီးက အဖွဲ့ချုပ်ကြိုဆိုတဲ့ တိုက်ရှေ့မှာ ခြံဝင်းကြီး ရှိတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာ လူတွေက ပြည့်နေတယ်။ ခုနတုန်းက လိုက်လာတဲ့ လူတွေက အဲဒီလူအုပ်ထဲဝင်ပြီးတော့ အသံချဲ့စက်တွေ ဖွင့်တယ်၊ သံပုံးတွေ တီးပြီးတော့ ခုနကပြောခဲ့တဲ့
အော်တဲ့လူတွေက ဘုန်းကြီးတွေလည်း ရောက်လာတော့ သူတို့လည်း အကုန်လုံး ထွက်ပြေးကြတယ်။မတ္တရာ ထွက်လာပြီးနောက် တလမ်းလုံးက အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ မန္တလေးရာက်တော့တရက်၊ ၂ ရက်နေတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ မန္တလေးက ထွက်တဲ့အချိန် မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာမုံရွာဘက်ကို ထွက်တယ်။ မုံရွာဘက်ကို ထွက်တော့ မြင်းမူအရောက်မှာ သတင်းရတယ်။
ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဒီသတင်းရတယ်။ ဘဘက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေကို ခေါ်တယ်၊ ဦးအောင်ရွှေကလည်းဘဘကို ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်ဆုံတယ်။ ခုနကပြောသလို သတင်းရတယ်။သတင်းရတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေကိုတော့ သတင်းပို့ထားပြီးပြီ။ ခင်ဗျာတို့သွားတဲ့အခါ သတိထားသွားပါ၊ စသဖြင့် အဲဒီလို ပြောတယ်။
မုံရွာက လူငယ်တွေလည်း ပါတယ်။ မြို့လူထုလည်း ပါတယ်။ နောက် မုံရွာက သံဃာတော်တွေရော၊မန္တလေးဘက်က လိုက်လာတဲ့ သံဃာတွေလည်း ပါတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတားအဆီး အပိတ်အပင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘာမှ မဖြစ်သွားဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ
အဲဒီဟာတွေကို ရှင်းရလင်းရတာ လုပ်ပြီးတော့၊ ပြေလည်တော့ သွားတယ်။ ဘဘတို့က ဗဟိုက အမိန့်စာနဲ့လာတဲ့အတွက် ပြောလည်တော့ သွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာစပြီး ပဋိပက္ခလေးတော့ ရှိနေကြပြီ။တည်းတဲ့ အိမ်ရောက်တော့ ၁၁ နာရီလောက် ရှိပြီ။ အဲဒီမှာ လူငယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ
တကယ်တမ်းကျတော့ ဘေးကနေ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကလည်း ထပ်ထပ်ရနေကြတယ်။ ဒါနဲ့မုံရွာကနေ ထွက်တော့ လိုက်ပို့တဲ့ လူအုပ်က မနည်းဘူး။ သံဃာတော်တွေရော၊ မုံရွာက
ဘုတလင်လောက် ရောက်ခါနီးတော့ ဘာသိလဲဆိုတော့ နောက်က လိုက်လာတဲ့ ကားတွေကို ဖမ်းတယ်၊ဆီးတယ်၊ တားတယ်၊ ပိတ်တယ်တွေ လုပ်တယ်လို့ ကြားတယ်။
ပန်းကုံးဆွတ်တာတို့ လုပ်တာတွေ ရှိသလို တချို့နေရာတွေက ၁ဝဝ-၁၅ဝ လောက်ရှိတဲ့ လူတွေက ၅နာရီလောက်မှာ ဘုတလင်က ထွက်လာတယ်။ လမ်းမှာရှိတဲ့ ရွာတွေကကြိုတာတို့၊တလျှောက်လုံး
တရားမဟောနိုင်တော့ပါဘူး။ လာကြိုတဲ့ လူတွေကို လက်ကလေးပြပြီးပြန်နှုတ်ဆက်ပြီးလာခဲ့တဲ့ အချိန်မှာစိုင်ပြင်ကြီးဆိုတဲ့ နေရာကို ရောက်တယ်။အဲဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်ကသိပ်မမှောင်သေးဘူး၊ အလင်းရောင် ရှိတယ်။
ကျနော်ကလည်း ရပ်စောင့်နေတယ်။ တခါပြန်ထွက်လာတော့ ကျည်ရွာကို ရောက်တယ်။ ကျည်ရွာမှာတခါရပ်တယ်။ ကျည်ရွာမှာ ရပ်တဲ့ အချိန်မှာ နည်းနည်းလေး ကြာတယ်။ ၁ဝ မိနစ်၊ ၁၅
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြည့်ရဦးမယ်။ အခြေအနေသိအောင် ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကားနဲ့ ဘဘကား ရပ်ထားတဲ့နေရာနဲ့ကိုက်၂ဝ-၂၅ လောက် ဝေးမယ်။ အဲဒီကို ဘဘသွားလိုက်တယ်။
သင်တန်းပေးထားတဲ့ သူတွေလား။ တပ်ထဲက အဝတ်အစား လဲပြီးတော့မှ လုပ်တာလား၊ ရဲထဲကပဲလားဆိုတာကို စဉ်းစားနေမိတယ်။
ပြောနေတော့ ဘဘတို့က ထိုင်နေတယ်။ ခဏနေတော့ ဘဘတို့အထဲက ဦးပေါခင်က အခြေအနေကဘာမှမထူးဘူး၊လူကြီးတွေလာတယ်လို့လည်း ပြောတယ်။အဲဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့အခြေအနေအေးသွားတယ်။ကျနော့်အနားကနေအခြေအနေလေး ချောင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးသွားကြည့်တယ်။
ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်လုပ်တဲ့ သဘောတော့ ပေါ်တာပေါ့လေ၊ ဟိုဘက်ဒီဘက်က ၅ဝ စီ – ၁ဝဝ စီ၊
ဟားတိုက်ကြ လုပ်ကြတယ်ဗျာ။ သဘောကတော့ ခေါ်လာတဲ့ လူတွေကို လုပ်ခိုင်းတာပဲ။ တကယ်တော့အောက်တမ်းကျတာပေါ့ဗျာ၊ ဘဘ စိတ်ထဲမှာတော့ အဲဒီမိန်းမတွေက တော်တော်အောက်တမ်းကျတဲ့
UZa Wana ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
ဒီပဲရင်းလုပ်ကြံမှုကြီး၏မှတ်တမ်းများထဲမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကားအားမောင်းသော ကားမောင်းသမားမှ ပြန်ပြောင်းပြောပြချက် မှတ်တမ်းတခု :
ဒီပဲယင်း သမိုင်းမှန် ပေါ်ချင်သူ ဒီပဲယင်း ၉ နှစ်ပြည့် အထူးအင်တာဗျူးမှ အင်တာဗျူးဆောင်းပါး – http://www.mizzimaburmese.com/interview/9406-2012-05-30-09-59-18.html
Posted: 22 May 2013 12:55 AM PDT
"ဗြိတိန်လွှတ်တော်အမတ်က သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အကြောင်းရှင်းလင်း" (RFA Burmese)
ဗြိတိန်လွှတ်တော်အမတ် Ms Rushanara Ali ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို ဗြိတိသျှ ပါလီမန်အဆောက်အဦ အတွင်းက အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တစ်ခုမှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမူဆလင် ဒုက္ခသည်တွေနေတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ သောက်ရေနဲ့ အစားအစာမလုံလောက်မှုတွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ချို့တဲ့နေတာတွေ၊ သန့်ရှင်းမှု မရှိ တာတွေကို တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ နောက် ပေါက်တောမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးတွေက မီးဖွားဖို့ အတွက် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ မီးဖွားခွင့်မရှိတဲ့ အတွက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတာကို အဲဒီစခန်းတွေက ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေက သူ့ကို ပြောပြတဲ့အကြောင်း Ms Ali က ဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး၊ Ms Ali က အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ရန်မူလာမယ့်အခြေအနေတွေကို ကြောက်လန့်နေကြောင်း၊ နောက်သူတို့ရဲ့ မူလနေထိုင်တဲ့ နေရပ်ကို ပြန်နေဖို့အတွက်ဆိုရာမှာလည်း သူတို့ရဲ့ လုံခြုံမူကို ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။
အဲဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ UK ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Mr David Mepham က သူတို့အဖွဲ့ကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ "All you can do is Pray: Crime Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Rakhine State" " ဆုတောင်းနေရုံသာ လုပ်နိုင်တယ်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ရေးနဲ့ လူသားဖြစ်ခွင့်အပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ ရာဇဝတ်ပြစ်မှု" ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းအကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကို ပေးပို့တဲ့ အကူအညီတွေကို မြန်မာအစိုးရကနေ ပိတ်ပင်ဟန့်တားမှုမရှိစေဖို့ နဲ့ မုတ်သုန်ရာသီကို ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အမိုးအကာ၊ ဆေးဝါးနဲ့ ရှင်းသန့်ရေး အကူအညီတွေ အမြန်ဆုံးပေးရေးကို UK အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကနေ မြန်မာအစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း ၊ အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေအတွက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေ ကို မြန်မာအစိုးရက ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်အကြောင်း Ms Ali က အဓိကထား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအစည်းအဝေးပွဲကို ဗြိတိသျှ လွှတ်တော်မတ် တချို့၊NGO အဖွဲ့အစည်းတွေ တစ်ချို့၊လန်ဒန်အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်း နဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့ အပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ် ၅၀ နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် လန်ဒန်မြို့က ရခိုင်လူမျိုးတွေတက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Myanmar has experienced significant transitions in its economic and political institutions over the past year and half, but it has yet to respond to the recent burst of attacks against the country's Muslim minority. Muslims compose only 5% of Myanmar's 60 million population, and with the displaced Rohingya minority among the country's population, the current government's inability to seriously address this issue setsadangerous precedent.
What is concerning to many is the recent BBC footage in Myanmar where law-enforcement agents stood idly by as Buddhist monks and many others, often affiliated with the "969" movement, attacked different Muslim minorities in Rakhine and Meiktila. Violence between the two groups will not subside in the coming months. While the EU and many others have lifted trade restrictions, it is important to note how exactly Myanmar is going to handle this. Aung Sung Kyi, Myanmar's most eminent leader has takenamore conciliatory approach in addressing this issue, emphasizing Myanmar's, need to buildamore unified society and have the Rohingyas integrated withinaBuddhist-majority nation. Kyi mentionsanotable point about integration, but the rise of Wirathu,aradical Buddhist monk who has called for the removal of Muslims and referred to them as the chief cause of these riots, has made this difficult.
The basic duty of any government is to protect its citizens. By not protecting its own people, the current Myanmar government is leavingawindow of opportunity for more violence, less integration, andamore polarized society to develop. When communal tensions occur, we hear the voices that are projected the loudest. What we often don't hear are the voices of the marginalized. These are the stories of the 5% of the Muslims there, and the many other minority communities all throughout the world.
Myanmar has many challenges ahead. Bringing an end to this violence and incorporating different ethnic groups into its democracy can help consolidateasmoother transition away from the military junta, which still has formidable power in the country. Picking on the minorities won't solve the problem. Integrating them intoabroader coalition in which their interests are represented will.
Posted: 22 May 2013 12:31 AM PDT
Read this to know HOW the President U Thein Sein REFUSED TO ANSWER or don't know how to answer the question of "Why Hate Speech are freely allowed to preach."
Read this to know HOW the President U Thein Sein Avoid the "Swan Ar Shin" and 969….failing to answer Depayin Massacre and Ant-Indian /Anti Muslim INSTIGATOR issue…
Posted: 22 May 2013 02:41 AM PDT
Sekarang nyata memilih Perdana Menteri secara "convention" iaitu seorang Presiden Umno itu adalah Perdana Menteri sudah jelas tidak lagi "feasible". Ini di sebabkan Umno sudah tidak mampu lagi mewujudkan kepimpinan yang ber "consequence" untuk negara kita.
Sememangnya Umno dan BN sedang menurun sokongan ramai. Semasa Abdullah Badawi yang dikatakan oleh setengah pihak seorang Perdana Menteri yang "tidur" dan tidak bersedia untuk membuat persiapan menghadapi pilihanraya, beliau tetap mendapat 140 kerusi dalam PRU 12 yang lalu.
Pihak yang mahu melakukan perubahan ini mesti membawa rakyat berfikir dalam "environment" yang baru supaya masing-masing akan merasa kebersamaan dalam melakukan perubahan dan membina negara yang bersatu padu itu. Semua pihak wajar merasakan keterlibatan mereka dalam usaha ini. Apabila dibawa rakyat bersama untuk mencapai penyatuan ini, maka rakyat akan bersama-sama menjaga apa yang telah diputuskan bersama itu.
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပဋိပက္ခ တားဆီးရေး အဖွဲ့၏ ရုံးခန်းအား ဗြဟ္မစိုရ် လူမှုကူညီရေး အသင်းနေရာ မှ ကံတတ်ကုန်းသို့ ၀န်ကြီးချုပ်အမိန့်ဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းခိုင်း
အထူးသတင်း — 20 May 2013
မူရင်း – ဒသဂီရီ (မန္တလေး)
သတင်း – MMMမကြာသေးမှီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိတ္ထီလာမြို့နယ် အတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိမ်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အပေါ်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ တာဝန်ယူခြင်းမရှိသော မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ရဲမြင့် သည် ပြသနာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဗြဟ္မစိုရ် တရား လက်ကိုင်ထားခြင်းမရှိပဲ တရားလက်လွတ်ပြောဆိုတတ်သူ တစ်ဦးအဖြစ် ကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်များအတွင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ပဋိပက္ခ ကာကွယ် တားဆီးရေး အဖွဲ့၏ ရုံးခန်းအား အဆိုပါ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့် အမိန့်ဖြင့် ဗြဟ္မစိုရ် လူမှုကူညီရေး အသင်း နေရာမှမြို့ပြင် ကံတတ်ကုန်းသို့ ရွှေ့ပြောင်း ခံခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။
"၀န်ကြီးချုပ် အမိန့်နဲ့ ရွှေ့ခိုင်းတယ်လို့ပဲ သိရတယ်။ ဘယ်လိုလဲဗျာ၊ ဒီနေ့ပဲ သမ္မတကြီးက ခရီးသွားတယ်၊ ဒီနေ့ပဲ မန္တလေးမှာ ပဋိပက္ခ တားဆီးရေး အဖွဲကို မြို့ပြင်ထုတ်တယ်။
မန္တလေးမှာ ပြဿနာဖြစ်ရင်တော့ ဒီဝန်ကြီးချုပ် တာဝန် မကင်းဘူး" ဟု ပဋိပက္ခ ကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted: 21 May 2013 10:54 PM PDT
"စီးပွားရေးအကုန်ပိတ်ဆို့လို့ မြောက်ကိုး၇ီးယားကို ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရှာခဲ့တယ်လို့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့VOA မှ စီစဉ်သည့် အမေရိကန် ရောက် မြန်မာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ မှာဦးသိန်းစိန်ကပြောသွားပါတယ်…"
စီးပွားရေး အကုန်ပိတ်ဆို့တာတွေ ဖြစ်အောင် ဘယ်သူကလုပ်ခဲ့တာလဲ…..။
၁၉၉၀ လွတ်လပ် တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လစ်လျူရှုခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ……။
စစ်တပ်အကြီးအကဲကိုယ်တိုင် ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း စစ်တန်းလျားကို ပြန်မသွားပဲ တွယ်ကပ်နေခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ….။
ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူဆိုပြီး ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေကိုပါမကျန် အကုန်ဆွဲသွင်း၊ တွန်းထုတ် လုပ်ပစ်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ……။
တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်တယ် အကြောင်းပြပြီး အာဏာသိမ်း၊ လွှဲအပ်သင့်တဲ့ အချိန်မှာ ကတိမတည်၊ စကားအမျိုးမျိုးပြောပြီး အာဏာငမ်းဖမ်းခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ……။
လူ့အခွင့်အရေးမပြောနဲ့၊ ကိုယ့်အချင်းချင်းတောင် အခွင့်ကြုံရင်လှော်စား၊ ကျော်စား နဲ့ ဟင်္သာကိုးသောင်းဇာတ်ခင်းပြီး အခွင့်အရေးမှန်သမျှကို ချိုးဖောက်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲ…..။
တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အပစ်ရပ်ညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ဘောင်ကျော်ပေးပြီး မြန်မာ့သယံဇာတတွေအားလုံး မှောင်ခိုဈေးကွက်ရောက်အောင် လုပ်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ……။
မြန်မာ့သယံဇာတမှန်သမျှ အကုန်စိတ်ကြိုက်ရောင်းစားပြီး တိုင်းပြည်ကိုတော့ ဖွတ်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပစ်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ…..။
မြန်မာ့ သားကောင်း ၊သမီးပျိုတွေ ယိုးဒယားမှာ သန်းနဲ့ချီထွက်ပြီး ရရာအလုပ်လုပ်ကိုင်စား၊ ဘ၀မျိုးစုံပျက်တဲ့ထိ ဖြစ်အောင် တာဝန်မဲ့ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ…..။
ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာတွေ ဝေးလို့ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ သာသနာက သံဃာတော်တွေကိုပါ မရှောင် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်တဲ့အထိ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ…..။
ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဘဲ၊ ပိတ်ဆို့တာကိုအကြောင်းပြ ၀ါဒမှိုင်းတွေလဲ ၀အောင်တိုက်ခဲ့ပြီးပြီဘဲ။
ခုချိ်န်မှာ အဖြစ်သင့်ဆုံးက မှားခဲ့တာတွေကို အကုန်ပြန်တောင်းပန်။ ဆက်မမှားအောင်ကြိုးစား။ စိတ်ဓာတ်အမှန်နဲ့ ပြည်သူကို ဆက်ဆံ။ ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ မဟုတ်ရင်တော့၊ ကြားရတာ နားခါးသဗျာ…..။
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အောင် ဘယ် တိရိစ္ဆာန် တွေ လုပ်ခဲ့တာလဲ နွားကြီးရဲ့ ။